Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): This is Kachin and Burmese translation paper of Guy Horton for Kachin Event.
This is Kachin and Burmese translation paper of Guy Horton for Kachin Event.
at 2/11/2013 07:29:00 PM
Jinghpaw Mung kaw nna Hkyakhkyak hpyi lajin dat ai lam
Lawu de na hkyakhkyak lajin laroi ai ga hte hkritkajawng na zawn nga ai mabyin ni gaw,
Myenmung hte seng nna shaning law law sawk hkaja nga ai ningka wa Guy Horton hku nna
tang madun wa ai, Myen hpyendap hte KIOalapran gaphkat shazim mai na mahkrun n-mu
mada lu ai hte garum kahtau lam ningra nga ai Myenmung Dingdung daw, Jinghaw mung kaw nna shana wa ai lam ni rai nga ai.
Ngai gaw, ndai laika hpe, Jinghpaw mung dingdung daw, Myen-Miwa ga jarit kaw na ka shagun ai re. Ngai hku nna, Myen hpyendap ni matut manoi gap sharu nga ai mortar nsen ni hpe na taw nga ai nhtoi ram ram na sai rai nna, dai nsen ni gaw grai grau nna nihtep wa nga ai. Ndai ginra na mungshawa ni mung asawng arawng re ai lam ni byin wa na hpe maja let la dingda taw nga ma ai.
Nawku jawng ni hpe hkyinghkum 24 hpaw tawn da ai. Mungshawa ni gaw, tinang hta hyen
n'gun htam shi hku grau law nga ai taihpyen ni hpe, mungshawaashingdep shingtaw ai
n'gun hte hkapgan gaat taw nga ai Wunpawng share shagan ni, majan pa hta na lawtkawt
hkamjan lu na matu kyuhpyi nga dingyang rai ma ai. Ndai zawn re ai ninggyet majanalapran, mungshawa ni hpeshatawng shada nna dingsaalam hpe banhkum ai Geneva Conventionaarticle3hte seng nga ai. Jinghpaw ningbaw ningla ni gaw Tamil Tiger ni galaw lai wa ai zawn terrorist ni n-rai ma ai: nanghpam hpaga hta machyu ai gumshem jaubu ni mung n-rai nga ai hpe dum matsing ra ai. Teng sha nga yang, shanhte ni gaw, shaning law law wa madu uphkang asuya magam lit hpe lit la gunhpai nga ai rai nna, Hkristan makam masham hta hkridun nga ai Wunpawng sha law malawng mung madi shadaw nga ma ai. Raitim, Myen hpyendap gaw shanhteaHkristan makam masha hte myusha maka kumla niamajaw, shanhte hpe gasat nga ma ai. Shing rai, amyu shamyit masing hte seng ai tara (law of genocide) hte mung seng wa sai.
Shawng ningnan madung dat ra na lam ni gaw, gaphkat jahkring ai lam n-nga ga ai hte
mareng, ya mung n-nga shi ai, lam rai nga ai. Gumsan magam Theinsein matsun da ai hte
maren, gap hkat jahkring ra na January 19 ya jahpawt hkying 06:00 aten hta, ngai nga ai nta kaw na pru dat yang, mortat hte laknak kaba ni hte shakram la ai hpe na lu ai. Ndai nsen ni gaw hpagawn para gap kapaw ai sinat kaji nsen ni n-re. Myen hpyendap ni hku nna shatawng shada ai hte maren ladat masng hte gap ai laknak kaba ni nan rai nga ai.Ndai zawn byin ai lam ni gaw Jinghpaw mung shara shagu ngu na hta nga ai rai tim, nkau mi hpe sha media hkan tang madun lu ma ai.
Dai majaw, ngai hku nna gaw, gap hkat jahkring sai lam hpe international community ni
nna, atang ahpa masat masa galaw kau ai lam hpe manu mana tsang ai ngu nna tsun
mayu ai. Ndai lam ni gaw, masing kaba hte nan masu magaw ai lam, shing n-rai, Gumsan
magam Theinseinamatsun hpe tatut hkrang shapraw ai lam hte, hpyendap kata matsun
numhtet shalai ai lam, madat mara hkansa ai lam ningra ai lamamajaw mai byin ai.
Numdaw lahkawng ngu na hta, Kachin ni hku nna, tinanag mungshawa hpe makawp maga na matu hkyen lajan da ai hkapgan masing ni gaw aten galu n-hkam lu na re. Jet bomber, laknak kaba, mortar kaba ni hte katut yang gaw, Shanglawt hpyenla niashanhteamungshawa ni hpe aten galu hta, shing n-rai, aten mi laman hta lai nna makawp maga lu na matu n-mai byin ai.
Numdaw masum ngu na hta, ndai zawn aten hte aten galaw taw nga ai masing kata,
humanitarian disaster sha n-ga, shinggyin wuhpawng hpe tawtlai ai n-shawp n-kap lam
ni law law matut byin wa mai ai. Ndai lam ni gaw ginlam lahkawng hta mahta nna mai tsun
ai. Mungshawa ni gaw, shanhte gara de mung matut koiyen n-mai mat sai majaw, bai ninghkap gasat wa mai ai. Myitsu salang ni yawng gaw bai gasat na matu hkyen lajang taw nga sai.
Ma kanu ni gaw tinang kasha ma kaji ni hpe Miwa hkran maga de sa dat nna, hkapgan majan shang na matu tinang shara de bai nhtang wa nna hkyen lajang nga masai. Ndai ginra kaw ngai nga ai laman na lu ai sakse mabyin ni zawn re ai shinggyin ahkaw ahkang tawtlai hkrum ai lam(humanitarian disaster) ni byin wa mai ai.
Ndai la ni hpe ngai tsun dan aiayawshada ai lam gaw, mungshawa ni hku nna hkapgan gasat nna, Myen hpyendap ni dang shagrawt kau ai rai yang, grau nna mungdan shingga na masam maram sakse tai ai ni n-lawm ai rai yang, byin wa mai ai n-hkru n-shawp lam ni hpe nanhte dum nga na matu re.
Numdaw mali hku nna, lama ndai zawn Kachin ni hpe sat sharu ai lam byin wa yang, kaga
amyu bawsang ni mung gahkyin gumdin let bai ninghkap wa na re. Dai rai yang, Myenmung
gaw dinghku majan kaba de kalang bai nhtang gayin shang wa ra na re.
Shawng de byin lai wa yu sai mawru bai n-gayin wa hkra tang du, masan sa hkra ahkyak
la ra na re.
UN hku nna Rwanda, Yugoslavia, hte Sri Lank ni hkan shanhteashutshai ginlut mat ai lam
hpe masam maram mahtai tam nna, 'n-hkru n-shawp ai lam hta shanut nga sai' (complicity
with evil) nga tang madun lai wa masai. Dai hte maren re ai n-hkru nshawp, shanut shanat re
ai lam gaw, Jinghpaw Mung hta bai byin wa mai ai. Ndai laika gaw, ndai zawn re ai lam n-byin
wa hkra, shinggan wuhpung wuhpawng ni hku nna ladat shaw pat shingdang na matu lajin
laroi ai lachyum re. Ndai gaw, shawa wunawng ruk ninggyet ai lam sha n-re. Ndai gaw, tinang
a lamu ga ginra hpe makawp maga shakut nga ai Kachin bawsang-makam masham wuhpung
wuhpawng ni hpe hpyen zai masing hte shamyit shagrawt ai majan re.
Dai majaw lawu de na lam ni hpe hkrang shapraw ra ai:
Masan sa na UN datkasa langai shatsam na, dai gaw, charteraprinciple hpe dating
dakan gunhpai mayu ai wa, UN shimlam kongsi kaw na lit jaw dat ai wa, Jinghpaw mungdaw
shara shagu de n-dut n-dang hkawmsa lu ai wa rai ra na. Lama na hpyendap ni kum da ai Myen
asuya ni hku nna ndai lam hpe ahkang n-jaw ai rai yang, gaphkat jahkring na ai lam hpe madi
shadaw nga ai, IDP ni kaput bang wa na hpe n-ra sharawng nga ai, Miwa ni maga hku nna lit la
ya mai na. Ya aten hta hkrit tsang ra dik ai Jinghpaw mung ginra ni gaw, Miwa ga jarit hte matut
taw nga ai lam hpe mung dum ra nga ai.
Gaphkat jahkring ai lam, shimlam kongsi kaw nna lit shatsam nna, Miwa asuya, US,
EU hte UN organ ni madi shadaw ai rai na, UN organ langai ngai kaw nna moniter galaw ya
nna, gaphkta jahkring ai lam hpe mung ndau shabra na.
Rapra ai hte nganggrin ai simsa lam. Lama na ginjaw asuya gaw reform hpe teng sha
galaw mayu ai myit rawng ai rai yang, tengman ai federal munghpaw hkrang hpe bawngban
jahkrup nna, madu uphkang ahkang aya hpe masat masa galaw ya ra na.
Hpyendap ni jumtek da ai Myen asuya hpe, international sanction ni gaw gan
jahkring da ai sha rai nna, tsepkawp dawm kau ai n-re ngu ai lam ja ja shadum jahprang na.
Gaphkat jahkring simsa lam ginjang ni hpe ninghkap, nyet kau ai rai yang, dai sanction ni hpe
bai shagrin na. Lama mungshawa ni hpe amyu shamyit majan hpaw gasat ai rai yang, gingdan
ai hku matai htang ahkyak la na.
Ndai lajin laroi ai ga hpe lawan dik ai hku nna shachyam shabra garum ai hte madi shadaw
lawm mai ai.
Guy Horton gaw University of London, School of Oriental and African Study kaw na researcher
rai nna, Myenmung kata na shinggyin ahkaw ahkang tawtlai ai lam ni hpe shaning law law sawk
sagawn nna sumtang tang taw nga ai.Shi gaw, Dying Alive: Justice in Burma hte kaga laika law
law hpe ka shalat ai ningka wa rai nga ai.
ဇန်န၀ါရီလ၊ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်
ကချင်ပြည်နယ်မှ အရေးပေါ် မေတ္တာရပ်ခံချက်
အောက်ပါ အရေးပေါ် မေတ္တာရပ်ခံချက်နှင့် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ
ဂိုင်းဟော်တန်သည် ကချင်ပြည်နယ်မှနေ၍ ပေးပို့ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗမာစစ်တပ်နှင့်
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တို့အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီမှု လက္ခဏာ
အရိပ်ယောင်မတွေ့ရသေးဘဲ တိုက်ပွဲများမှာ ပိုမိုပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး လူသားချင်း
စာနာထောက်ထားမှုအခြေအနေမှာလည်း ပိုမိုဆိုးရွားလာလျက်ရှိကြောင်း ဂိုင်းဟောတန်မှ
ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာနုိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်ရှိ ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားပိုင်းကနေ
ဤစာကို ရေးသားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ မော်တာများ၊ အမြောက်များဖြင့်
၂၄-နာရီပတ်လုံး ဖွင့်ထားကြသည်။ ထောင်သောင်း
ပေါင်းများစွာသော ပြည်သူတွေရဲ့ အားပေးထောက်ခံမှုတွေနဲ့ ကချင်စစ်သားတွေဟာ
ဤကဲ့သို့သော စစ်ပွဲမျိုးတွင် ဂျင်နီဗာ(စစ်မက်ဆိုင်ရာ)ပဋိဥာဉ်စာချုပ်၊ စာပိုဒ် ၃ အရ
တမင်တကာရည်ရွယ်သော အကြမ်းဖက်မှုမျိုးတွင် အရပ်သားများဟာ (စစ်မက်ဥပဒေရဲ့ )
ဒီနေရာမှာ တစ်ခု မှတ်သားသင့်တဲ့ အချက်ကတော့ ကချင်ခေါင်းဆောင်များသည်
အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ၊ ဥပမာ- တမီးလ်ကျားသူပုန်ကဲ့သို့ မဟုတ်သလို၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှာ
ပါဝင်တဲ့ ဘိန်းဘုရင်အဖွဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့သည် နှစ်အတော်ကြာ ကတည်းက
ခ၇စ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသူ ကချင်ပြည်သူအများပိုင်းရဲ့ ထောက်ခံ
လက္ခဏာ(identity)ကို ဖော်ဆောင်တဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေးအပေါ် အခြေအခံပြီး
ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံနေရသူများဖြစ်သည်။ သုို့ ဖြစ်၍ ဒီနေရာမှာ
လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ (law of genocide) အကျုံးဝင်မှုရှိပါသည်။
ပထမအနေနဲ့ မှတ်သားသင့်တာကတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှုဟာ မရှိခဲ့သလို ရှိလည်း
ရှမနေပါဘူး။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ကြေငြာချက်အရ အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှု အကျုံးဝင်ရမှာ
ဖြစ်တဲ့ ဇန်န၀ါရီ ၁၉ ရက်နေ့ ၊ စနေနေ့ ၊ နံနက် ၆.၀၀ နာရီ မှာ ကျွန်တော့်အခန်းပြင်ကို
ထွက်လိုက်တာနဲ့ပဲ မော်တာသံ၊ အမြောက်သံတွေက
လက်နက်ငယ်များနဲ့ ကျိုကြား၊ ကျိုကြား ပစ်ခတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဗမာစစ်တပ်မှ
နေပြီး လက်နက်ကြီးကျည်ဆန်၊ အမြောက်ဆံများနဲ့
ပစ်ခတ်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ အခြားနေရာများမှာလည်း
ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိနေသော်လည်း သတင်းမီဒီယာများမှ လက်တွေ့ ဖြစ်ရပ်ကြီးရဲ့
အစိတ်အပိုင်းငယ်လေးကိုသာ သတင်းရယူနိုင်ပြီး ထုတ်လွှင့်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဒါကြောင့် အဆီအငေါ်မတည့်သော လှည့်ကွက် (သို့ ) သမ္မတသိန်းစိန်ရဲ့
လိုက်နာဖို့ ဗမာစစ်တပ်မှ စနစ်တကျပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ “အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး”
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ယုံမှားလက်ခံ လွယ်မိမှာကို
ရှနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဂျက်လေယာဉ်နှင့်ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများ၊ လက်နက်ကြီးကျည်ဆံများ၊
အမြောက်ဆံများနဲ့တကွ စစ်တပ်မှ အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်ရောက် တုိုက်ခိုက်
၄င်းတို့ရဲ့ ပြည်သူများအပေါ် ရေရှည်မှာ
(မဟုတ်လျှင်လည်း) ရေတိုမှာတောင် တောင့်ခ၊ကာကွယ်ပေးနုိုင်ချင်မှ ပေးနုိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဘေးဒုက္ခကြီး(humanitarian disaster)
သည်သာမကဘဲ လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ် ရာဇ၀တ်ကျူးလွန်မှုများ(crimes against
humanity) ပျံ့နှံ့ ဖြစ်ပွားလာနိုင်ချေလည်း ရှပါသည်။ ဤနေရာမှာ အကြောင်းအရင်း
နှစ်ခုရှိပါသည်။ ပထမအချက်အနေနဲ့ ကတော့
မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြန်လည်ခုခံနိုင်ချေများခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သိသည့်
သိမ်မွေ့သည့် လူအချို့တောင် ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ အမျိုးသမီးများ
ဟာလည်း ၄င်းတို့ရဲ့ ကလေးငယ်များကို တရုတ်ဘက်ခြမ်းသို့ ပို့ထားပြီး ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့
ကျရောက်ဖွယ်ရာရှိတဲ့ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဘေးဒုက္ခကြီးဟာ
ဗမာစစ်တပ်မှ အနိုင်ယူတိုက်ခိုက်စဉ်တွင် အထူးသဖြင့် အရပ်သားများမှ ပြန်လည်
ခုခံကြသောအခါနှင့် ပြည်ပမှစောင်ြ့ ကည့် လေ့လာမှုများမရှိသောအခါမှာ
ဖြစ်ရပ်များဟာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထပ်ခါတလဲဖြစ်ပွားမယ့်အလားအလာဟာ အလွန်
သေချာသလောက်နီးပါးဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ဒီအချက်တွေကို ပြောနေရခြင်း ဖြစ်ပါ
ဤကဲ့သို့ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အပြင်းအထန်
စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပြသသည့်အနေဖြင့် တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကို
အလားအလာလည်း ရှနိုငပါသည်။ မြန်မာနုိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းစစ်ထပ်မံ တောက်လောင်
သို့ပါ၍ ယခင်ကဲ့သို့ ဘေးဒုက္ခဆိုးများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားရလေအောင် ထိထိရောက်ရောက်
ကုလသမဂ္ဂမှ ရ၀န်ဒါ၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားနှင့် သီရိလင်္ကာနုိုင်ငံတို့တွင် ကျူးလွန်ခဲ့သော
ကျရှုံးခန်းများကို လေ့လာသုံးသပ်မှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ထိုကျရှုံးမှုများစွာမှာ အနည်းဆုံး
တစ်ခုခန့်သည် “မကောင်းမှုများ ပါဝင်ပတ်သတ်ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း”ကို ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
အန္တရာယ်များလည်း ပေါ်ပေါက်လာနုိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသို့ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ
တားဆီးနုိုင်ရန် ဤစာဖြင့် ပြင်ပကမ္ဘာသို့ အနူးအညွတ်မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုဖြစ်နေသည်မှာ ‘မျိုးနွယ်စုတူ အချင်းချင်း ဖြစ်ပွားသည့် အဓိကရုဏ်း’ မဟုတ်ပါ။
ကြိုးပမ်းနေသော ကချင် ethnic-religious တို့အပေါ် စစ်အင်အားအလုံးအရင်းနှင့်
သို့ပါ၍ အောက်ဖော်ပြပါတို့ကို ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
၁. ကချင်ပြည်နယ်ရှိဒေသများအားလုံး၊ အထူးသဖြင့် နေရပ်စွန့် ခွာထွက်ပြေးသူများထံသို့
နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ သွားရောက်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးအပါအ၀င် လုံခြုံရေးကောင်စီမှ ပြဌာန်း
ပဋိဥာဉ်စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို စစ်မှန်စွာလိုက်နာကျင့်သုံးသော
အရေးပါသည့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ သံတမန်ကို ခန့်အပ်သင့်သည်။ အကယ်၍ ဗမာအစိုးရမှ
စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေများအတွင်းသို့ သွားရောက်ခွင့်မပြုပါလျှင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး
၂. လုံခြုံရေးကောင်စီမှ ပြဌာန်းပြီး တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ EU နှင့် သင့်လျော်ရာ UN
အဖွဲ့အစည်းများမှ ပံ့ပိုးပေးကာ အရေးပါသော ကုလသမဂ္ဂ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့မှ
စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးမှုရှိသည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတစ်ရပ်ကို ကြေငြာသင့်ပါသည်။
၃. အကယ်၍ ဗမာအစိုးရရဲ့
ကျသည် ဆိုပါလျှင် စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု အခြေအနေအတွင်းတွင်
စစ်မှန်သည့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ဖော်ဆောင်ရန်ဦးတည်ချက်ရှိသည့် တရားမျှတပြီး၊
တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းပြီး အကောင်အထည်ဖော်သင့်
၄. စစ်ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဗမာအစိုးရအား အသိပေးအပ်သည်မှာ နုိုင်ငံတကာ
အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုအများစုသည် ဆိုင်းငံ့ထားသည်သာဖြစ်ပြီး ပယ်ဖျက်ခြင်းမျိုး မရှိသေးပါ။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ငြင်းဆန် နေသည့်
အခြေအနေမျိုးတွင် အဆိုပါ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ပြန်လည်သက်ရောက်နိုင်ဖွယ်
ရှိပါသည်။ အကယ်၍ အရပ်သားပြည်သူများအား လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုမြောက်သော
တုိုက်ခိုက်မှုများကျူးလွန်ပါက သင့်တင့်သောတန်ပြန်မှု ထွက်ပေါ်လာမည်သာဖြစ်သည်။
လေ့လာရေးဌာနမှ သုတေသနအရာရှတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူသည် မြန်မာနုိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရေး
အခြေအနေများအား နှစ်ကာလအတန်ကြာ လေ့လာမှုများနှင့် ထုတ်ဖော်တင်ပြမှုများ
ပြုလုပ်နေသူလည်း ဖြစ်သည်။ သူသည် Dying Alive: Justice in Burma (ရှင်ရက်နှင့်
သေခြင်း - မြန်မာနုိုင်ငံရှိ တရားမျှတမှု) အပါအ၀င် အခြားအစီရင်ခံစာ အတော်များများ